Liverpool oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Crystal Palace oo ay ku booqatay garoonka Selhurst Park… +SAWIRRO – Gool FM
(London) 23 Jan 2022. Liverpool ayaa saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Crystal Palace oo ay ku booqatay garoonka Selhurst Park, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-3, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida ahayd ee Liverpool.
Daqiiqadii 8-aad kooxda Liverpool ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Virgil van Dijk kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Robertson.
32 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Oxlade-Chamberlain oo caawin ka helay saaxiibkiis Robertson ayaa wuxuu ciyaarta ka dhigay 0-2 ay ku hoggaamineysay kooxda Liverpool.
Daqiiqadii 55-aad kooxda Crystal Palace ayaa dhalisay gool waxaana 1-2 ka dhigay laacibkooda Odsonne Édouard kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Jean-Philippe Mateta.
89 daqiiqo marka ay mareysay kooxda Liverpool ayaa loo dhigay rigoore waxaana gool u badelay xiddiga khadka dhexe reer Brazil ee Fabinho, dheesha ayaa sidaas ku noqotay 1-3 ay ku hoggaamineysay Reds.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 1-3 ay kaga soo adkaatay Liverpool, kooxda Crystal Palace oo ay ku booqatay garoonka Selhurst Park, Reds ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka waxayna leedahay 48 dhibcood.